Esi ewepu ngwa ndị arụnyere na gam akporo | Gam akporosis
Ignacio Lopez | 05/04/2021 14:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Wepu ngwa ndị arụnyere na gam akporo, a maara dị ka bloatware, dị mgbe niile (na nwute, ga-anọgide na-abụ) nsogbu nke ọ nweghị onye nrụpụta dị njikere iwepụ kpamkpam na njedebe ya n'oge a. Ọ dabara nke ọma, ndị ọrụ ahapụla omume ịkpọasị a ọtụtụ afọ gara aga ma taa, anyị ga-alụso sọftụwia ndị nrụpụta mgba.
Mana, ọ bụghị naanị na anyị nwetara nsogbu ahụ na gam akporo, mana ọ dịkwa na iOS, ebe ọ bụ na Apple na-ekwusi ike na ọ ga-anọgide na-etinye ngwa ndị na-enweghị onye ọ bụla na-eji dị ka ngwa Mail maka akwụkwọ ozi, Voice Notes, Compass, Stock Market ... N'ezie, ihe ngwọta iji kpochapụ (ewepụghị n'ezie) ngwa ahụ dị mfe karịa na Gam akporo.
Mgbe anyị na-ekwu maka bloatware ma ọ bụ tinye arụnyere na sọftụwia nke ọtụtụ ndị ọrụ anaghị eji ma ọlị, anyị agaghị ekwu maka ngwa ndị nrụnye arụnyere, mana anyị ga-ekwukwa banyere todas na nke ọ bụla n'ime ngwa nke Google tinyere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na nke ọ bụla n’ime smartphones ndị ruru ahịa na gam akporo.
1 Wepụ ngwa ndị arụnyere na gam akporo na ADB
1.1 Kwado ndị nrụpụta
1.2 Kwado ọnọdụ nbipu USB
1.3 Budata ngwa ADB
1.4 Hichapụ ngwa
2 Wepụ ngwa ndị arụnyere na gam akporo na AppControl
3 Gbanyụọ ngwa na gam akporo na-enweghị iwepụ ha
Wepụ ngwa ndị arụnyere na gam akporo na ADB
Ruo ọtụtụ afọ, ọtụtụ ndị na-emepụta egbochi ndị ọrụ ịnweta sistemụ iji mee mgbanwe iji wụnye omenala ROM ... Ọ dabara nke ọma, ịnweghị ikikere mgbọrọgwụ na njedebe abụghị nsogbu, ebe anyị nwere ụzọ ndị ọzọ na-enye anyị ohere ịme otu ọrụ ahụ: iwepụ ngwa ndị arụnyere na ọdụ anyị.
Naanị ihe dị mkpa maka ngwa mmepe Google ADB, ngwa nke, site na iwu dị mfe, na-enye anyị ohere iwepu ngwa ọ bụla anyị achọghị ịhụ na ngwaọrụ anyị. Iji wepu ngwa ndị arụnyere na-ahapụghị akara na ngwaọrụ gam akporo anyị, anyị ga mee usoro 4 nke m na-akọwa n'okpuru:
Kwado ndị nrụpụta
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ enyere ndị mmepe aka, ebe ọ bụ na enweghị ọrụ ndị a arụ ọrụ, anyị agaghị enwe ike ịrụ nzọụkwụ ọzọ nke anyị ga-eme ka ọnọdụ USB debugging rụọ ọrụ.
Iji rụọ ọrụ Mmepụta nhọrọ na gam akporo, anyị ga-enweta na menu ebe nọmba ụlọ nke anyị gam akporo. A na-ahụkarị ozi a n'ime sistemụ ma ọ bụ Nchịkọta Ozi na ekwentị.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nhọrọ a na menus, ị nwere ike chọta ya n’igbe ọchụchọ achọtara n'elu menu Ntọala, jiri okwu a "chịkọtara" na-enweghị nkwupute.
Kwado ọnọdụ nbipu USB
Ihe nke abuo anyi aghaghi ime bu gbanye ọnọdụ nbipu USB, ọnọdụ na-enye anyị ohere inweta ohere site na USB ruo na njedebe. Enweghị a nzọụkwụ, ngwa na anyị ga-eji ga-enwe ike iji kpọtụrụ na ngwaọrụ.
Iji rụọ ọrụ ọnọdụ nbipu USB, anyị na-enweta ya Onye Mmepụta nhọrọ dị n'ime sistemụ Sistemụ, anyị na-ele anya maka mpaghara Debugging ma rụọ ọrụ ngbanwe ahụ Mkpebi USB.
Budata ngwa ADB
Na nzọụkwụ ọzọ, anyị nwere ibudata ngwa ADB site na nke a njikọ wee pịa Etu esi ebudata Ngwaọrụ SDK Platform na Windows / Mac o Linux dabere na sistemụ arụmọrụ anyị na-eji. Ozugbo ebudatara, anyị na-ewepụ faịlụ ahụ (ọ nweghị ihe a ga-etinye).
Ihe mbu anyi gha eme, mgbe emechara usoro niile a di n’elu jikọọ ngwaọrụ anyị na kọmputa. N'oge ahụ, a ga-egosipụta ozi na ihuenyo na-akpọ anyị ka anyị kwe ka USB debugging na igodo RSA. Usoro a na - eje ozi iji hụ na anyị nwere ike ịnweta ngwaọrụ ahụ, na ngwaọrụ ahụ bụ nke anyị.
Ọzọ, anyị na-emeghe windo iwu nke sistemụ arụmọrụ anyị ma nweta ụzọ ebe anyị ebudatara ADB iji malite usoro nke ga-enyere anyị aka wepu ngwa mgbọrọgwụ na ngwaọrụ anyị na-ahapụghị akara ọ bụla.
Mgbe ahụ anyị na-ede n'ahịrị iwus "adb shell pm list packages" na-enweghị ruturu iji gosi ndepụta nke ngwa niile arụnyere na kọmputa anyị.
Ozugbo anyị chọtara aha ngwa ahụ anyị chọrọ iwepụ, anyị na-ede "adb shell pm iwepụ -k –user 0 package-name" na-enweghị nkwupute. Anyị kwesịrị dochie ngwugwu-aha na aha nke ngwa anyị chọrọ iwepụ, nke na nke a bụ flipboard.boxer.app.
Wepụ ngwa ndị arụnyere na gam akporo na AppControl
Nhọrọ dị mfe, nke dị maka Windows, bụ iji ngwa ADB App Control, ngwa nke rdochie interface iwu na otu nke windo,, ebe anyị nwere ike ịhọrọ ngwa ngwa anyị chọrọ iwepụ na ngwaọrụ anyị.
Iji jiri ngwa a, anyị ga-ebu ụzọ Kwado ndị nrụpụta y Kwado ọnọdụ nbipu USB, dị ka anyị kọwara na ngalaba gara aga.
Mee ndị nrụpụta ọrụ
Iji rụọ ọrụ Mmepụta nhọrọ na gam akporo, anyị ga-enweta na menu ebe nọmba ụlọ (n'ime sistemụ / ozi nke ekwentị) nke gam akporo anyị wee pịa ọtụtụ oge ruo mgbe ozi gosipụtara na anyị emeela nhọrọ maka ndị mmepe n'ụzọ ziri ezi.
Ozugbo anyị mechara rụọ ọrụ ndị a, anyị na-ebudata ngwa ahụ ADB Ngwa Njikwa, ngwa na oge dị naanị maka WindowsYa mere, ị naghị eji sistemụ arụmọrụ a, ị ga-eji usoro akara iwu akọwapụtara na ngalaba gara aga.
Ozugbo anyị ebudatara ngwa ahụ, jikọọ ngwaọrụ gam akporo anyị na PC ma mee ya. Ngwa ADB App Control bụ executable ma tinye faịlụ niile dị mkpa iji rụọ ọrụ, ya mere, ọ gaghị etinye ya na kọmputa anyị.
Mgbe ịmalite ya na nke mbụ, ga-ebudata usoro nke faịlụ na akara ngosi nke ngwa iji gosiputa ihe omuma a n'uzo doro anya.
Ngwa a ga - egosi menu dị na Bekee, asụsụ nke anyị nwere ike ịgbanwe site na elu nke ngwa ahụ, pịa mkpụrụedemede ES iji gosipụta asụsụ niile dịnụ, n'etiti Agụnyere Spanish, dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ihe osise ndị na-esonụ.
Iji wepu ngwa site na ngwaọrụ anyị, anyị ga-agafe na windo ebe ngwa niile dị na ngwaọrụ anyị gosipụtara, họrọ ha ma gaa n’aka nri.
Na kọlụm a, anyị họrọ Iwepụ na nhọrọ igbe, anyị uncheck nhọrọ Debe data na oghere (iwepu data niile na ngwa a) wee pịa iwepụ ya.
A ga-egosipụta ozi ga-agwa anyị na ọ bụrụ na anyị ewepụ ngwa ọ bụla na sistemụ ahụ, anyị nwere ike ịmanye iweghachi ngwaọrụ site na ncha, nke pụtara na ọ ga-efunarị data nke ọ bụla anyị chekwara. Pịa Ee.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji weghachite ngwa ndị ahụ mgbe ewepụsịrị ha, ngwa ahụ na-akpọ anyị ka anyị mee otu nchekwa. A na-atụ aro ya mana ọ bụghị iwu.
Ozugbo i wepụrụ ngwa ahụ, a nhazi ozi a ga-egosipụta na ngwa.
Gbanyụọ ngwa na gam akporo na-enweghị iwepụ ha
Nke a bụ usoro mfe mgbe wepụ ngwa si anyị usoro, ma ọ na-ahapụ akara, n'ihi ya, anyị nwere ike ịchọta ụzọ dị mkpirikpi na ngwa anyị wepụrụ na kọmputa anyị mgbe anyị na-eji ọnụ anyị, ụzọ mkpirisi na-akpọ anyị ka anyị wụnye ngwa ahụ ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ nhọrọ kachasị mfe, ọ na-ahapụ ụzọ ụkwụ nke ahụ anyị nwere ike ịchọtaN'ihi ya, ọ bụ nke mbụ nhọrọ dị n'ihi ya mfe ma ọ dịghị ihe ọzọ na-atụ aro ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kpamkpam ichefu banyere ngwa na emeputa installs na niile ha ngwaọrụ.
Iji kwụsị ọrụ na gam akporo, anyị ga-enweta ntọala nke ngwaọrụ anyị, pịa Aplicaciones ma họrọ ngwa nke anyị chọrọ ịkwụsị. N'ime nhọrọ ngwa ahụ, a ga-egosipụta nhọrọ ahụ Iwepụ / gbanyụọ.
Ọ bụrụ na nhọrọ Gbanyụọ na-grayed si, nke a adịghị, ya mere naanị nhọrọ iji kwụsị ya bụ site na iji ngwa ADB ma site na akara iwu (dị na Windows, macOS na Linux) ma ọ bụ jiri ngwa ADB AppControl, ngwa nke naanị ya dị maka Windows.
Methodszọ niile m gosipụtara gị n’isiokwu a na-enye anyị ohere iwepụ ma ọ bụ wepụ ngwa ụfọdụ na ngwa anyị, ngwa ahụ Ha ga-adị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị eweghachi ngwaọrụ anyị.
Nke a bụ n'ihi na mgbe a na-eme usoro ahụ, usoro weghachite ROM ọ debeere jiri sistemụ arụmọrụ emelitere emelitere ma ọ bụrụ na anyị eweghachite ụdị nke sistemụ arụmọrụ site na ROM nke ndị nrụpụta.
Nanị ụzọ ị ga-esi nwee ike iwepụ ngwa ndị arụnyere na mbụ na ekwentị mkpanaaka anyị dị ka ọ dị na mbụ, site na ịgbanwee ROM nke ngwaọrụ ahụ, ihe, n'ihi erughị eru nke ndị nrụpụta, anyị enweghị ike ime n'ụzọ ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala na ngwaọrụ ndị ọhụrụ.
Site n'iji ROM dị iche na nke onye nrụpụta nyere, ọ gụnyere naanị ngwa nke onye okike ya gụnyere. Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ nke dị afọ ole na ole na ịchọrọ ịnye ya ohere nke abụọ, iwepụ ngwa ndị arụnyere abụghị ihe ngwọta ị na-achọ, ebe ọ bụ na ihe ị chọrọ bụ wụnye ROM nke dabara na ngwaike gị n'ụzọ zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi ewepụ ngwa ndị arụnyere na gam akporo